Marsaa keessaa ba'uuf, hima Do...Loop gitaa'aa qofan danda'ama. marsaa keessaa ba'uuf. Sagantaan raawwii hima kan hima marsaa duuka bu'u wajjin itti fufa. Yoo himoonni Do...Loop wal keessa galan, too'annaan marsaa sadarkaa olaanaa itti aanutti darba.
Marsaa keessaa ba'uuf marsaa For...Next gitaa'aa qofaan danda'ama. Sagantaan raawwii hima jalqabaa kan hima Next duuka bu'u wajjin wajjiin itti fufa. Himoota walkeessa galan keessatti, too'annaan marsaa sadarkaa olaanaa itti aanutti darba.
Adeemsa Faankishinii yeruma san baasi. Sagantaan raawwii hima kan waamichaa Faankishinii duuka bu'u wajjiin itti fufa.
Sagantaa xiqqaa yeruma san baasi.Sagantaan raawwii hima waamichaa Sub duuka bu'u wajjiin itti fufa.
Himni Exit caasaa xumuraa hin qindeessuu, fi dirqama hima End wajjin dhiphachuu hin qabdu.
REM Returns the index of the entry or 0 ( Null)